Flex hentitra PCB - KingSong PCB Technology Ltd
Ny mihetsika Flex PCB Board dia vaovao vita pirinty faritra karazana birao izay Mitambatra ny mateza ny PCB henjana sy ny hifanaraka amin'ny zava-vonona ny hilefitra ny PCB. rehetra karazana PCB , henjana sy malefaka mitambatra no tena mahatohitra ny ratsy fampiharana tontolo iainana, noho izany ny orinasa fanaraha-maso,-pitsaboana sy ara-tafika fitaovana mpamokatra, ny tanibe orinasa ihany koa tsikelikely hanatsara ny mihetsika Flex PCB isaina noho ny ohatry ny output ho toy ny manontolo.
1. Inona no mihetsika Flex PCB Boards?
Ny fahaterahana sy ny fampiroboroboana ny FPC sy PCB niteraka ny vaovao vokatry ny Flex mihetsika PCB birao, ny Flex mihetsika PCB birao no FPC sy ny mihetsika faritra birao, rehefa avy fanerena sy maika dingana, dia natambatra avokoa araka ny mifanaraka dingana fepetra takiana ho mamorona ny faritra birao amin'ny manohana toetra ny hilefitra birao sy henjana birao.
2. Fisokajiana ny mihetsika Flex PCB Boards:
Raha araka ny fanasokajiana dingana, ny fomba malefaka mampifamatotra ny birao ho an'ny birao henjana dia azo zaraina ho sokajy roa: ny Flex henjana mitambatra birao sy ny Flex henjana nampikambana birao, ny maha samy hafa ny hentitra Flex mitambatra birao teknolojia, dia mety ho ao amin'ny dingana, ny miaraka, izay manana iraisana jamba izy ka nalevina koa lavaka famolavolana, ary afaka koa izany no ambony kokoa hakitroky ny faritra nanaovana, fa Flex henjana mitambatra birao, misaraka malefaka birao sy henjana birao indray fanaovana tsindry sy voafintina, faritra iray zana-kazo, dia manana fifandraisana famantarana fa raha tsy misy lavaka design.But fotoana izao, ny " Flex-mihetsika PCB Board " dia amin'ny ankapobeny antsoina hoe hentitra loatra rehetra sy henjana ny birao mamatotra vokatra, nefa tsy mizara roa.
3. Ny toetra ara-batana ny mihetsika Flex PCB Boards:
mihetsika Flex PCB Boards Tsy mitovy amin'ny tany am-boalohany sy ny PCB FPC eo amin'ny ara-nofo, fitaovana sy process.In ny endrika ara-nofo, ny fanazavana ny birao henjana dia ny fanazavana ny FR4 ny PCB, ny ara-nofo ny birao malefaka dia ny ara-nofo ny Pi na PET, ireo fitaovana roa manana ny mpiray, ny hafanana tsindry shrinkage tahan'ny dia tsy mitovy sy ny sisa.
4. tombontsoa mihetsika Flex PCB Boards:
1. Light lanjany
2. Interface sosona manify
3. Short fampitana lalana.
4. Small fanokafana hazavana miditra.
5. Low avo tabataba sy azo itokisana.
Noho ny Flex henjana PCB dia ny fitambaran'ny FPC sy PCB , ny famokarana tsy mitovy amin'ny olon-tsotra PCB sy FPC, manokana dingana ho manam-pahaizana manokana hanaraka ny fanaraha-maso, Voalohany, KingSong CAM injeniera dia araka ny orinasa famokarana fahafahana hanome mpanjifa ny antonony Optimization , manao ny endrika ny mpanjifa dia afaka hihaona ny PCB orinasa famokarana capacity.After ny birao malefaka dia nafindra ny alalan 'ny sosona anatiny, tokony ho etỳ ambonin'ny browsed mba hanatsarana ny mamatotra hery, sy ny miaro akanjo mavo ny polyimide dia voaaron'ny ny fanerena, toy izany koa ny made..The FPC no dingana manaraka dia ny hanambatra ny PP amin'ny hardboard PCB mba hanangana ny Flex board.It henjana dia zava-dehibe ny manamarika fa ny malefaka faritra birao afaka ny tsy handotoana izany mba hisorohana ny endriky ny vita product.After mandalo amin'ny andiana ary atsofony lavaka, orifices, sary famindrana, solder saron-tava, surface fitsaboana mba hahazo ny farany ho any amin'ny avo product.Due ilaina ny mihetsika Flex PCB Boardvokatra, nandinika tsara sh Ould hatao alohan'ny sambo mba hahazoana antoka fa ny entana rehetra natolotry ny mpanjifa vokatra tsara indrindra.
KingSong manana traikefa manan-karena eo amin'ny famokarana mihetsika Flex PCB Boards, dia manome zana-kazo ny faritra vita pirinty amin'ny kalitao sy mateza fampisehoana raha ho vidim-mahomby eo amin'ny manufacturing.and PCBs ihany koa ny naka fanahy mampiasa automated Optical Inspection (Aoi) ary mandeha ho azy X-ray Inspection (AXI) ny fitaovana mba hahazoana antoka fa manome ny hafainganam-pandeha sy ny ilaina asa lehibe eo amin'ny taratasy fangatahana.